Umzimveliso ongaxutywanga, abaXhasi - abavelisi basechina basechina
Nasekuqiniseni ibhola sentsimbi
Wakha Shot Stainless
Ukunikela Angular Steel uhlalutye
ICarburizers (Abavelisi beCarbon)
ICarburizer, ekwabizwa ngokuba yiarhente ye carburizing okanye is carburant, sisongezo ekwenziweni kwentsimbi okanye ekubunjweni ukwandisa umxholo wekhabhoni. IiCarburizers zisetyenziselwa ukucoca iiCarburizers zentsimbi kunye ne-Carburizers yentsimbi, kunye nezinye izongezo kwiCarburizers, ezinje ngezongezo zebreyiki, njenge-materia yokuxabana
I-Ferro silicon barium inoculant luhlobo lwe-FeSi-based alloy equlathe inani elithile le-barium kunye ne-calcium, inokuyinciphisa ngokumangalisayo imeko ebandayo, ivelise intsalela encinci. Ke ngoko, i-Ferro silicon barium inoculant isebenza ngakumbi kune-inoculant ene-calcium kuphela, kwintengiso
I-Nodulizer ngumlutha onokuthi ukhuthaze ukwenziwa kwe-spheroidal grafite kumaqhekeza e-graphite kwiinkqubo zemveliso. Inokuthi ikhuthaze i-spheroidal graphites kwaye inyuse inani le-spheroidal graphites ukuze iipropathi zazo ziphuculwe. Ngenxa yoko, i-ductility kunye nobunzima
Iarhente yeFerro silicon strontium nucleating arhente luhlobo lwealsi esekwe kwi-FeSi equlathe inani elithile le-barium kunye ne-calcium, inokuyinciphisa ngokumangalisayo imeko ebandayo, ivelise intsalela encinci. Ke ngoko, i-Ferro silicon barium inoculant isebenza ngakumbi kune-inoculant ene-calc kuphela
I-Silicon Calcium Deoxidizer yenziwe ngamalungu e-silicon, calcium kunye nentsimbi, yindawo efanelekileyo ye-deoxidizer, iarhente yedisulfurization. Isetyenziswa ngokubanzi ngentsimbi ekumgangatho ophezulu, isinyithi esisezantsi sekhabhoni, imveliso yentsimbi engenasici kunye nengxubevange yesiseko se-nickel, ingxubevange ye-titanium kunye nolunye uhlobo lwemveliso ekhethekileyo.
I-Ferro silicon magnesium Nodulizer ikhupha i-alloy eqamba umhlaba onqabileyo, i-magnesium, i-silicon kunye ne-calcium. I-Ferro silicon magnesium nodulizer yeyona nodulizer isemagqabini nesiphumo esomeleleyo se-deoxidation kunye ne-desulfurization. I-Ferrosilicon, Ce + La mish yesinyithi okanye umhlaba onqabileyo we-ferrosilicon kunye ne-magnesium